Nagios Core: Gịnị bụ Nagios na otu esi etinye ya na Debian GNU / Linux? | Site na Linux
Nagios Core: Gịnị bụ Nagios na otu esi etinye ya na Debian GNU / Linux?
Linux Post Wụnye | | Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Na ngalaba nke Netwọk na sava enwere ngwa dị ukwuu ma dị mma maka Ndị nchịkwa Sistem / Server (SysAdmins). Ya mere, taa, anyị ga-ekwu maka oku ama ama Nagios Isi.
Nagios Isi ọ bụ isi ụdị nke efu Nagios. Kedu nke bụ isi na -ewu ewu akụrụngwa / ọrụ / mmemme nleba anya netwọkụ na usoro nke oghe emeghe.
Webmin: nchịkwa site na ihe nchọgharị weebụ
Ma ebe ọ bụ na anyị anaghị ekwukarị okwu metụtara ngwa, mmemme na sistemụ site n'ọhịa nke Netwọk na sava ma ọ bụ ojiji pụrụ iche maka Ndị nchịkwa Sistem / Server (SysAdmins), anyị ga -ahapụ n'okpuru njikọ ụfọdụ ozugbo na ụfọdụ mbipụta gara aga metụtara mpaghara IT a:
"Webmin bụ ngwa nhazi sistemụ nwere ike ịnweta weebụ maka OpenSolaris, GNU / Linux na sistemụ Unix ndị ọzọ. Site na ya, ị nwere ike hazie akụkụ nke ọtụtụ sistemụ arụmọrụ, dị ka ndị ọrụ, oke ohere, ọrụ, faịlụ nhazi, mmechi kọmputa, wdg, yana gbanwee ma jikwaa ọtụtụ ngwa efu, dị ka sava weebụ Apache, PHP, MySQL, DNS, Samba, DHCP, n'etiti ndị ọzọ." Webmin: nchịkwa site na ihe nchọgharị weebụ
TurnKey Linux: Virtual Ngwaọrụ Ọbá akwụkwọ
1 Nagios Core: Nagios nke efu na nke efu
1.1 Kedu ihe bụ Nagios Core?
1.3 Kedu otu esi etinye ya na Debian GNU / Linux 10?
1.3.1 1.- Nzọụkwụ iji kwadebe Sistemụ arụmọrụ
1.3.2 2.- Budata ngwanrọ dị ugbu a
1.3.3 3.- Kpokọta ngwanrọ dị ugbu a
1.3.4 4.- Mepụta ndị ọrụ na otu
1.3.5 5.- Wụnye ngwugwu dị iche iche dị mkpa
1.3.6 6.- Wụnye faịlụ nhazi Apache
1.3.7 7.- Wụnye ma hazie Firewall site na IPTables
1.3.8 8.- Mepụta akaụntụ onye ọrụ na Apache ịmalite na Nagios Core
1.3.9 9.- Malitegharịa ekwentị / Malite Ọrụ ndị dị mkpa
1.3.10 10.- Banye na Nagios Core
1.3.11 Ịwụnye Nagios Core Plugins
1.3.12 Ihuenyo gbaa
2 Nhọrọ uzo efu 10 mepere emepe
Nagios Core: Nagios nke efu na nke efu
Kedu ihe bụ Nagios Core?
Dị ka ukara website nke Nagios, Nagios Isi A kọwara ya dị ka ndị a:
"Nagios® Core ™ bụ netwọkụ mepere emepe yana ngwa nleba anya sistemụ. Ọ na -enyocha ndị ọbịa (kọmpụta) na ọrụ ndị ị kwupụtara, na -eme ka ị mara mgbe ihe na -adịghị mma na mgbe ha ka mma. Emebere Nagios Core ka ọ rụọ ọrụ n'okpuru Linux, n'agbanyeghị na ọ kwesịrị ịrụ ọrụ n'okpuru ọtụtụ sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dabere na Unix. Ọzọkwa, ọ bụ ụdị n'efu nke ngwa anyị ugbu a akpọrọ Nagios XI."
N'etiti ọtụtụ atụmatụ nke Nagios Isi Enwere ike ikwu 10 ndị a:
Nlekota ọrụ netwọkụ (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, n'etiti ndị ọzọ.)
Nyochaa akụrụngwa nke ndị ọbịa dị iche iche a na -enyocha (ibu nhazi, ojiji diski, n'etiti ndị ọzọ.)
Nhazi ngwa mgbakwunye dị mfe nke na -enye ndị ọrụ ohere ịzụlite nyocha ọrụ nke ha.
Ndekọ ọrụ nlele.
Ikike ịkọwa usoro ndị ọbịa nke netwọkụ site na iji ndị ọbịa "nne na nna", na -enye gị ohere ịchọpụta na ịmata ọdịiche dị n'etiti ndị ọbịa dara ada na ndị a na -apụghị iru.
Ịma ọkwa kọntaktị mgbe nsogbu onye ọbịa ma ọ bụ ọrụ mere wee kpebie (site na email, pager, ma ọ bụ usoro akọwapụtara onye ọrụ).
Ikike ịkọwa ndị na -ejikwa ihe omume na -agba ọsọ n'oge ndị ọbịa ma ọ bụ ihe omume maka nchọpụta nsogbu.
Ntugharị akpaaka nke faịlụ ndekọ.
Nkwado maka mmejuputa ndị ọbịa nlekota oru.
Nchọgharị weebụ nke nhọrọ iji lelee ọnọdụ netwọkụ dị ugbu a, akụkọ ihe mere eme nke ọkwa na nsogbu, faịlụ ndekọ, na ndị ọzọ.
Kedu otu esi etinye ya na Debian GNU / Linux 10?
Tupu ịmalite akụkụ a, ọ dị mma ịmara dị ka ọ dị na mbụ maka okwu a bara uru, anyị ga -eji nke mbụ Weghachite Linux akpọ Ọrụ ebube GNU / Linux, nke dabere na MX Linux 19 (Debian 10). Nke e wuru na -eso anyị «Na-eduga na Snapshot MX Linux».
Agbanyeghị, ọ bụla GNU / Linux Distro kedu nkwado Systemd. Ya mere, anyị ga -eji nke a MX Linux Respin malite na Sistemụ GRUB GRUB site na nhọrọ gị na "Malite na Systemd". Kama nhọrọ ndabara ya, nke enweghị ya Systemd ma ọ bụ kama Sistemụ Sh. Ọzọkwa, anyị ga -emezu iwu iwu niile sitere na Onye ọrụ Sysadmin, kama Onye mgbọrọgwụ, sitere na Linux Respin kwuru.
Ma ugbu a maka nke gị ibudata, nwụnye na iji, anyị ga-eji «Ntuziaka nwụnye ngwa ngwa maka Debian« na ndị a ga -abụ abụ nye iwu imezu na ọdụ (console) sistemụ arụmọrụ gị:
1.- Nzọụkwụ iji kwadebe Sistemụ arụmọrụ
Melite ebe nkwakọba ihe ma wụnye ngwugwu dị mkpa yana dị mkpa iji rụọ ọrụ Nagios Isi.
2.- Budata ngwanrọ dị ugbu a
3.- Kpokọta ngwanrọ dị ugbu a
4.- Mepụta ndị ọrụ na otu
5.- Wụnye ngwugwu dị iche iche dị mkpa
6.- Wụnye faịlụ nhazi Apache
7.- Wụnye ma hazie Firewall site na IPTables
8.- Mepụta akaụntụ onye ọrụ na Apache ịmalite na Nagios Core
9.- Malitegharịa ekwentị / Malite Ọrụ ndị dị mkpa
Cheta na: Malitegharịa sistemụ ma ọ bụrụ na enwere nsogbu na iwu ndị a.
10.- Banye na Nagios Core
Gbaa ihe nchọgharị weebụ na igwe mpaghara ma ọ bụrụ na ị nwere gburugburu onye ọrụ eserese (GUI) ma ọ bụ na kọmpụta ọzọ na netwọkụ. Ma na adreesị adreesị dee nke ọ bụla n'ime iwu ndị a dị ka ọ masịrị gị:
Cheta na: Ọ bụrụ na ịhụghị windo "Nagios Core Login", lelee na Sistemụ arụmọrụ gị dabere na Debian GNU/Linux 8/9/10 nwere nhazi ziri ezi. "Document root" na Ihe nkesa Apache n'ime faịlụ nhazi a: /etc/apache2/apache2.conf. Dochie ụzọ /var/www site na ndị a: /var/www/html. Mgbe ahụ malitegharịa Ọrụ Apache ma ọ bụ Kọmputa, wee nwaa ọzọ na kọmpụta ahụ.
Ịwụnye Nagios Core Plugins
Melite ebe nkwakọba ihe ma wụnye ngwugwu dị mkpa yana dị mkpa iji rụọ ọrụ Ngwa Nagios.
Budata ma mepee ngwugwu dị ugbu a na "Nagios Plugins"
Chịkọta ma wụnye "Nagios Plugins"
Maka ozi ọzọ na Nagios Isi ị nwere ike lelee njikọ ndị a:
Ntuziaka nwụnye ngwa ngwa
Banyere Nagios Core
Nhọrọ uzo efu 10 mepere emepe
Ụlọ ọrụ kokpiiti
Nyochaa sava PHP
Iji mụtakwuo gbasara ihe ndị a ụzọ ọzọ na ndị ọzọ, pịa njikọ a: Akụrụngwa na Ngwa nlekota netwọkụ n'okpuru Isi mmalite.
Na nchịkọta, dịka a hụla Nagios Isi bụ ngwa ngwanrọ zuru oke maka ubi nke Netwọk / Sava na Ndị nchịkwa Sistem / Server (SysAdmins). Ma ọ bụghị naanị na ọ dị ike mana ọ na -agbanwe ma na -emegharị, ekele maka iji ọtụtụ ya plugins. Maka ndị nwere ike ghara iji ya, a na -enwekarị ụzọ ọzọ dị ka Zabbix, Icinga na Cockpit Project, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Nagios Core: Gịnị bụ Nagios na otu esi etinye ya na Debian GNU / Linux?
KDEApps2: Na -aga n'ihu na -enyocha ngwa KDE Community